Pure Ptfe Sheet - Pure Ptfe Sheet PTFE - Pure Ptfe Sheet Supplier - Pure Ptfe Sheet Teflon - PTFE ပြား Teflon စာရွက်, PTFE လှံတံပေးသွင်း, PTFE ဘုတ်အဖွဲ့ Teflon ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, PTFE ချောင်းတွေ Teflon ဘား, PTFE တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, သတ္တုပါး
နေအိမ် > PTFE ပြား > Pure Ptfe Sheet -
Pure Ptfe Sheet,Pure Ptfe Sheetအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Cox ပလတ်စတစ် အပေါ် Aug 12th, 2013rating: 4.5Quality Pure Ptfe Sheet supply by COX PlasticPure Ptfe SheetBest Pure Ptfe Sheet supply by China COX Plastic with best price.
မူလအစရာ: China (တိုက်) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Cox ပစ္စည်း: ptfe,PTFE
အထူ: 0.5-100မီလီမီတာ အရွယ်: 1000*2000မီလီမီတာ color: အဖြူ
အနိမ့်အမိန့်ပမာဏ: 100 ကီလိုဂရမ် / ကီလိုဂရမ်
supply နိုင်ခြင်း: 8000 လနှုန်းကီလိုဂရမ် / ကီလိုဂရမ်
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ,T / T
ထုပ်ပိုး Detail: wooden or Depending on the requirement of buyers.
Delivery Detail: 10-35နေ့ရကျ
PTFE စာရွက်, PTFE Skived စာရွက်, PTFE စာရွက်: : PTFE Plate hasawide range of practicable temperature from -180C~+260C andawax-like surface to which anything hardly sticks. Molded PTFE Sheet has the lowest coefficient of friction of all known solid materials. Molded PTFE Blocks has the best electrical properties of all plastic.
Project Name ယူနစ် ရလဒ်
ဆန့်နိုင်အား MPA ≥ 14.0
Thick( မီလီမီတာ ) 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Width ( မီလီမီတာ ) 100မီလီမီတာ, 300မီလီမီတာ, 1000မီလီမီတာ, 1220မီလီမီတာ
length ( မီလီမီတာ ) 100မီလီမီတာ, 300မီလီမီတာ, 1000မီလီမီတာ, 1220မီလီမီတာ, 2000မီလီမီတာ
အထူ ( မီလီမီတာ ) Weight အထူ ( မီလီမီတာ ) Weight
1.0မီလီမီတာ 3.42kg 1.0မီလီမီတာ 2.30kg
2.0မီလီမီတာ 6.85kg 2.0မီလီမီတာ 4.60kg
2.5မီလီမီတာ 8.56kg 2.5မီလီမီတာ 5.75kg
3.0မီလီမီတာ 10.27kg 3.0မီလီမီတာ 6.90kg
4.0မီလီမီတာ 13.69kg 4.0မီလီမီတာ 9.20kg
dimensi dan harga teflon sheet★ Kinija Tiekejas \_lt\_ -419 -hackers -school -blog -blogger -scam -scammers -schools -students★ ہائیڈرولک نلی★ uji viskositas pure PTFE★ PTFE stanja★ PTFE sheet buyer -alibaba -made -in -china -tradekey -ec21★ ptfe pris per kg★ HDPE ταινία ετικέτας★ harga plat teflon 1200 mm x 2000 mm x 11 မီလီမီတာ★ ராடு★